Fitsidihana ny tontolon’ny bilaogy Kiorda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2019 3:32 GMT
Ity ny herinandroko voalohany nampiasana fanangonam-baovao mba hijerena ireo bilaogy Kiorda ary tsy azoko antoka izay fahatsapako momba izany. Tena nankafy nijery bilaogy tsirairay isan-kerinandro ny ampahan'ny tenako, saingy mety ho tena mandany fotoana be izany. Nametraka fanangonam-baovao ho an'ny tranonkala Kurdistan Blog Count aho, ary raha mahaliana anao ny mampifandray azy io aminao dia ity ny tranonkala ho an'ny daholobe. Na izany aza, nahafahako nandamina ny lahatsoratra androany isaky ny lohahevitra izany fivezivezem-baovao izany, izay ahafahantsika tsy miresaka ny lohahevitra lehibe ihany fa koa miresaka lohahevtra avy amin'ireo bilaogera Kiorda izay lasa malaza tamin'ny vaovao.
Lahatsoratra voalohany, ny fifidianana any Iràka: Ny fitantaram-baovao faran'izay be mpijery indrindra momba ny fifidianana Irakiana dia ny bilaogy The Iraqi Vote (indrisy fa tsy mandeha tsara ao amin'ny tranonkalan'izy ireo ny rohy maharitra, na izany aza, manoro hevitra mafy aho mba hijerenao ny fanehoan-kevitra sy ny lahatsoratra raha mahaliana anao ity lohahevitra ity.) From Holland to Kurdistan sy Roj Bash manana fitantarana mahaliana momba ny fifidianana, indrindra ny mikasika ny latsa-baton'ny mpila ravinahitra — Manoro hevitra aho mba hamaky ireo fanamarihana manokana nomen'i Roj Bash. Kurdo avy ao amin'ny Kurdo's World manoratra ny hosoka mety hisy amin'ny fifidianana ary ny fanapahan-keviny tsy hifidy, manana rohy mahavariana misy ny sary avy amin'ny fifidianana izy. Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes maneho ny hafaliany amin'ny fahafahany mifidy sy ny fanantenany ho an'i Kurdistan mahaleo tena. Farany ao anatin'ity lisitra lavabe misy ireo bilaogera malaza koa ilay bilaogera Kiorda Bilal Wahab izay afaka nihaona tamin'ny filohan'i Etazonia tamin'ny andron'ny fifidianana (mino aho fa maro no hahafantatra ny sary.)!
Fizarana faharoa: Misy ireo fitsarana maromaro mandeha amin'izao fotoana izao izao tantarain'ny tontolon'ny bilaogy Kiorda mafy. Ny voalohany dia ny Dr. Kamal Sayd Qadir izay nogadrain'ny governemantam-paritra Kurdistan (KRG amin'ny teny Anglisy) ao amin'ny Kurdistan Irakiana noho ny heloka bevava izay ahitana ny “fanalam-baraka ny governemanta Kiorda sy ny adiny”. Niteraka olana momba ny fitokisana ny KRG izay nangataka tamin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina mba hanome fahalalahana miteny ho an'ireo Kiordany izany, kanefa mandà ny zo ho an'ireo Kiordany manokana. Na dia notantaraina betsaka indrindra tao amin'ny bilaogy Is-Ought problem aza izany, ireo bilaogera hafa kosa nandanjalanja io olana io, anisan'izany i Hiwa, Rasti sy Roj Bash. Betsaka ny fampitahana teo amin'ity fitsarana ity sy ny fitsarana ho avy izay hanenjehana ilay mpanoratra Tiorka Orhan Pamuk.
Fahatelo, fampahatsiahivana fotsiny ho an'ny olona mba hijery ny asa vitan'ny bilaogy Save Roj TV, izay manentana mba hanohy ny zo fandefasana amin'ny fahitalavitra Kiorda any Holandy.
Ary farany, nanoratra ny The Kurdistan Bloggers Union (Sendikan'ny bilaogera Kurdistan) mba hampahatsiahy ireo bilaogera Kiorda fa mila miambina ny fiarovana ny tenany manokana izy ireo rehefa mibilaogy.